December 5, 2019 - Update New
ညဘက်ဖားရှာထွက်ကြရာမှ (၁၃)နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦး—-ပြုကျင့်ခံရမှု
December 5, 2019 Naing 0
ညဘက်ဖားရှာထွက်ကြရာမှ (၁၃)နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦး—-ပြုကျင့်ခံရမှု ညဘက်ဖားရှာထွက်ကြရာမှ (၁၃)နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးအား ဦးလေးဖြစ်သူမှ သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ခဲ့၍ အမှုဖွင့် ဖမ်းဆီးအရေးယူ ကျောက်တံခါး ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်တံခါးမြို့မရဲစခန်းအပိုင် ဂုံမင်းကွင်း ကျေးရွာအုပ်စု လှည်းဘီးကွင်းကျေးရွာအနီး ရွာအပြင်ဘက်ရှိ ကောက်ရိုးပုံအနီး၌ ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက် […]
SEA Games မှာ သားဖြစ်သူ ရွှေရတဲ့နေ့၊ ဖခင်က ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်
SEA Games မှာ သားဖြစ်သူ ရွှေရတဲ့နေ့၊ ဖခင်က ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဝူးရှူးလက်ရွေးစင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Edgar Marvelo ဟာ SEA Games ပြိုင်ပွဲမှာ သူ့ဘဝရဲ့ပထမဆုံး ရွှေတံဆိပ်ကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပေမယ့်၊ ဖခင်ဖြစ်သူကတော့ မျက်ဝါးထင်ထင် ဂုဏ်ယူမသွားခဲ့ရပါဘူး။ သူဟာ သားဖြစ်သူ ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့နေ့မှာပဲ သေဆုံးသွားခဲ့တာပါ။Edgar […]
ကိုးရီးယားမှာ မျက်နှာ ခွဲစိတ်လိုက်လို့ အရင်နဲ့ မတူအောင် အရမ်းလှသွားတဲ့ အကယ်ဒမီ မို့မို့မြင့်အောင် (video file)
ကိုးရီးယားမှာ မျက်နှာ ခွဲစိတ်လိုက်လို့ အရင်နဲ့ မတူအောင် အရမ်းလှသွားတဲ့ အကယ်ဒမီ မို့မို့မြင့်အောင် (video file) အနုပညာလောကမှာ ယနေ့ထက်တိုင်အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ မင်းသမီးကြီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ အကယ်ဒမီမို့မို့မြင့်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ငိုခန်း၊ လွမ်းခန်းတွေအပြင် ဟာသတွေပါ ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ပရိတ်သတ်ကြီးရဲ့ အသည်းနှလုံးကို ယနေ့ထိတိုင် သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်စဉ်က […]
ခုပဲ ညာလက်ဖဝါးနဲ့ အဖြေရှာရအောင်
ခုပဲ သင့်ရဲ့ ညာလက်ဖဝါးကို ဖြန့်ကြည့်လိုက်ရအောင်.. နံပါတ် ဘယ်လောက်လဲ..? ခုပဲ ညာလက်ဖဝါးနဲ့ အဖြေရှာရအောင် ကိုယ့်ရဲ့လက်ဖဝါးကို ကြည့်ပြီး ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာကို ကြည့်ရအောင်နော် (၀၁). ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားသောသူ၊ ခေါင်းမာသောသူ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားပြီး ပညာရှင်တစ်ယောက်ကို လေးစားအားကိုးခံရမည့်သူပါ။ မမှားကိုနည်းအောင် ကြိုးစားနိုင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက အမြဲတမ်းမှန်ကန်နေမှာပါ။ ဒါပင်မဲ့ နည်းနည်းခေါင်းမာသူဖြစ်ပြီး […]
ဂုတ်၊ ဇာတ် ကျီးပေါင်း တက်နေသူများ.. အတွက် ဗန်ဒါရွက်လေးရဲ့အသုံးဝင်ပုံ
ဂုတ်၊ ဇာတ် ကျီးပေါင်း တက်နေသူများ.. အတွက် ဗန်ဒါရွက်လေးရဲ့အသုံးဝင်ပုံ ဂုတ်၊ ဇာတ် ကျီးပေါင်း တက်နေသူများ အတွက် ဗန်ဒါရွက်လေးရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဂုတ်၊ ဇက် ကျီးပေါင်းတက်နေသူများ ဗန်ဒါရွက်လေးကိူခူးလိုက်ပါ။ ရေမဆေးပါနဲ့ အရွက်မှာကပ်နေတဲ့ ဖုန်လေးတွေကို အဝတ်နဲ့ ပွတ်သုတ်လိုက်ပါ။ အရွက်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ အညှာအရိုးတံလေးကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ။ […]
ပြိုင်တူအဆုံးမစီရင်မီမှာ နောက်ဆုံးဓာတ်ပုံ အတူတူရိုက်ခဲ့တဲ့ လူငယ်စုံတွဲ
ပြိုင်တူအဆုံးမစီရင်မီမှာ နောက်ဆုံးဓာတ်ပုံ အတူတူရိုက်ခဲ့တဲ့ လူငယ်စုံတွဲ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက လူငယ်စုံတွဲတစ်တွဲဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ပြီး၊ ပြိုင်တူအဆုံးစီရင်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ သေကြောင်းကြံစည်ခြင်း မပြုမီမှာ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံထဲမှာ နှစ်ယောက်သား သေနတ်နှစ်လက် ကိုင်ထားပြီး၊ နားထင်တွေကို သေနတ်နဲ့တေ့ထောက်ထားတဲ့ ခြောက်ခြားဖွယ်ရာ ဓာတ်ပုံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ […]
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး သစ်သားပန်းပု ပြိုင်ပွဲမှာ ပထမဆုရရှိသွားတဲ့ ဒါးပိန်သားလေး
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး သစ်သားပန်းပု ပြိုင်ပွဲမှာ ပထမဆုရရှိသွားတဲ့ ဒါးပိန်သားလေး KMA Foundation က ကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး သစ်သားပန်းပုပြပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲနှင့် အရောင်းပွဲတော်ကြီးကို ပဲခူး ဆယ်မိုင်ကုန်းမှာတည်ရှိတဲ့ Shwe Pyi Resort မှာနိုဝင်ဘာလ (၂၉) ရက်မှ ဒီဇင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပလျှက်ရှိပါတယ်။ […]
အမျိုးသားတို့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆေးဝါးမလိုဘဲ ပိုကောင်းမွန်စေမည့် နည်းလမ်းများ
အမျိုးသားတို့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆေးဝါးမလိုဘဲ ပိုကောင်းမွန်စေမည့် နည်းလမ်းများ အမျိုးသားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမို ကောင်းမွန်လာအောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ့် ဆေးဝါးမျိုးစုံ ရှိနေပေမယ့် ဆေးတွေကို မမှီဝဲချင်ဘူးဆိုရင် သဘာဝနည်းနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်လာစေမယ့်အောက်ပါ နည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာ ပေးသင့်ပါတယ်။ အမျိုးသားစွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းစေမည့် အာဟာရ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာနဲ့အတူ […]
သင့်လက္ခဏာကိုသင်ပြန်ကြည့်ပါ ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်ရှင်များဟာနယ်နယ်ယယတော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်ရှင်များဟာနယ်နယ်ယယတော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ ပါရမီရှင်တွေပါ သာမန်လူပိန်းတွေအလိမ်ခံနေရတာသိသလိုအနာဂ်ဖြစ်မည့်အရာတွေကိုကြိုတင်တွက်ဆနိုင်သူများပါ အဲဒီလို X သင်္ကေတပါတဲ့ လက္ခဏာပိုင်ရှင်ဟာ ကြီးပွားချမ်းသာပြီး အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်တက်တယ်။ ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ မချမ်းသာသေးရင်လည်း ကြီးလာတဲ့အခါမှာ ပြည့်ပြည့်စုံနေရတက်ပါတယ်၊ နောက်ဆဌမအာရုံလိုခေါ်တဲ့ အကြားအမြင် ရတက်တယ်။ ဘယ်သူတွေကိုယ်အပေါ်ဘယ်လိုဆက်ဆံတယ် ချက်ချင်းသိတယ်။ အကြီးအကဲ ဖြစ်တက်တဲ့သူတွေမို့ အခက်ခဲတွေ ဘယ်လောက်ရင်ဆိုင်ရ. ရင်ဆိုင်ရ […]
ဆယ်နာရီ ကြာတဲ့အထိ ပင်လယ်ထဲမျောနေတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမား တစ်ဦးရဲ့ ကံကြမ္မာ
ဆယ်နာရီ ကြာတဲ့အထိ ပင်လယ်ထဲမျောနေတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမား တစ်ဦးရဲ့ ကံကြမ္မာ ပရိတ်သတ်ကြီး ဒီတစ်ခါ တင်ဆက်ပေးမယ့် သတင်းကတော့ ပင်လယ်ထဲမှာ ၁၀ နာရီကျော် ကြာမြင့်အောင် ကူးခတ်ခဲ့ရတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ နံနက် ၃ နာရီခွဲလောက်မှာ […]
ကူးစက်ခံရသူ စုစုပေါင်း ၆၅၀ ကျော်သွားပြီဖြစ်သော တရုတ်အဆုတ်နာရောဂါ နောက်ဆုံးသတင်း